प्रतिरक्षामा कांग्रेस, प्रतिपक्ष नै भएन – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
प्रतिरक्षामा कांग्रेस, प्रतिपक्ष नै भएन
काठमाडौं । वर्तमान संसदमा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेस अब आएर प्रतिरक्षामा रहन गएको छ । यसको न त संसदमा कुनै भूमिका देखिएको छ, न त उपस्थिति नै । यो बरु वर्तमान ओली सरकारको एक अंग झैं देखिन पुगेको छ । आश्चर्यको कुरा त के पनि छ यसले सरकारसँग भागबण्डा र साझेदारीको कुरा बारम्बार राख्ने गरिरहेको छ ।
वाम भनिने सरकार आडम्बरले उन्मत्त भएको छ भने प्रतिपक्ष प्यारालाइसिस ग्रस्त झैं छ । देशमा केही पनि काम भएका छैनन् । हल्लाखल्ला मात्र भएका छन् । सही सुझाव दिने र खबर्दारी गर्ने प्रतिपक्ष नै छैन । देश प्रतिपक्षविहीन अवस्थामा छ ।
संसदमा जनताका आवाज प्रखर रुपमा बोलिदिने नेताहरु छैनन् । यही कारणले पनि हो जनता ससाना कुराहरु लिएर सडकमा उत्रन थालेका छन् । दम्भी र अहंकारी सरकारलाई लागेको छ प्रतिपक्ष भनेको कांग्रेस त तह लागिसकेको छ भने यी जनता के हुन् र ? त्यसैले ओली सरकार जनदमनमा उत्रिएको छ ।
एक त संसद एकलौटी दलालहरुको क्रिडास्थलका रुपमा दर्ज हुन पुगेको छ । अर्कोतिर ती दलालहरुबाटै प्रतिपक्ष गायब भएपछि संसद आवाज विहीनताको अबस्थामा पुगेको छ । जनता समाचार सुनेर सरकारलाई धिक्कार्ने र प्रतिपक्षलाई घिनाउने गरिरहेका छन् ।
संसदीय व्यवस्थामा पार्टीको सरकार हुन्छ यो सबैलाई थाह छ । पार्टीकै प्रतिपक्ष हुन्छ पनि । तर अहिलेको प्रतिपक्ष भनिएको नेपाली कांग्रेस नेपालको संसदमा प्रतिपक्षमा छ कि छैन ? यसले केही काम गरेको पनि सुनिदैन । केही सुझाब दिएको पनि देखिदैन । सरकारका बारेमा आलोचना गरेको पाइँदैन । यसको काम के त ?